Madaxweyne Deni oo loo gudbiyay cabsho ka dhan ah guddiga doorashooyinka Puntland – Radio Daljir
Madaxweyne Deni oo loo gudbiyay cabsho ka dhan ah guddiga doorashooyinka Puntland
Seteembar 25, 2021 6:00 b 0
Ururrada Mustaqbal, Ifiye iyo Dhallinyarada ayaa cabasho wadajir ah oo ka dhan ah Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland u gudbiyay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, ogeysiiyeyna beesha caalamka.
Seddexda urur waxay ku tilmaameen doorashada tijaabbada ah mid baalmarsan dastuurka Puntland laguna qancinayo qaaraan-bixiyeyaasha.
Waxay ku baaqeen in laga dhursugo dhammaystirka Maxkamadda Sare, in meesha laga saaro habka liiska xiran ee doorashada goleyaasha deegaanka iyo maamulka Deni uu bixiyo yaboohii loogu talagalay ururrada siyaasadda diiwaangashan.
Waxay seddexda urur soo jeediyeen shirweyne ururrada siyaasadeed ka qeybgalaan si wax looga qabto daahfurnaan la’aanta Guddiga KMG Doorashooyinka Puntland.
Seddexda urur waxay u arkaan doorashada TPEC korjoogtaynayso mid tijaabo uun ah oo ururradu aysan ku kala badin doonin waayo ururro aan looga codaynin dhammaan degmooyinka ay Puntland ka taliso ma yeelan doonaan sharciyad siyaasadeed.
MUQDISHO: Diwaangalinta Musharaxiinta Aqalka Sare ee Somaliland oo la soo gabagabeeyay